“Waxaan cunaayay baakado” Mario Balotelli oo ka sheekeeyay duruuftii ku heysatay karaantiilka iyo inuusan cunno karsan karin – Gool FM
(Italy) 14 Maaajo 2020. Weeraryahanka kooxda Brescia ee Mario Balotelli ayaa daaha ka rogay inuu ku rafaaday intii lagu gudo jiray maalmihii bandowga, wuxuu ku kaftamay inuu baakado cunayay saddexdii maalmood ee ugu horreysay maalmaha karaantiilka.
Balotelli ayaa isu diyaarinaya inuu ku soo laabto tababarka kooxdiisa marka la gaaro 18-ka bishan Maajo, xilli la qorsheynayo in horyaalka Serie A dib loo ciyaaro 13-ka bisha Juun
Laacibkii hore ee Manchester City iyo Liverpool ayaa sidoo kale walaac ka muujiyay marka uu garoonka soo galo inuu hagaajin waayo xakameynta kubadda.
“Haddii aad kubadda iisoo baasto, ma awoodo inaan ku xakameeyo taabashada koowaad, laba bil ayaa ka soo wareegtay inaan kubbad taabto” ayuu ku yiri saaxiibkiis Alessandro Matri oo ay is toos uga sheekeysanayeen barta Instagram-ka.
“Waxaan ku sigtay inaan waasho labadii toddobaad ee ugu dambeysay, maxaa yeellay waxaan noqday kali”.
“Gabadheyda waxay joogaa magaalda Naples, wiilkeygana wuxuu joogaa magaalada Zurich, hooyadey waa da’, waxayna u baahan tahay ilaalin, walaalahey waxay karaantiil kula jiraan caruurtooda, sidaas darteed in kaligey la iga kala tago way igu adkaatay”.
“Macquul ma ahan inaan kaligey tababarto haddii aanan heysanin mashiinka lagu ordo, xitaa la iima ogoleyn, kaddib waxaan aaday beer yar oo ii dhow si aan ugu ordo”
Balse Balotelli ayaa qaybta ugu adkeyd noloshiisa muddadii karaantiilka ku sheegay inuusan helin cunno uu isugu talo galay, sidaas darteedna lagu qasbay inuu cunnooyin diyaarsan kaliya uu soo jumleysto.
“Aas-aas ahaan waxaan cunaayay baakado, waxaana isku dayay inaan darbiyada qaniino saddexdii maalmood ee ugu horreysay, waxba ma karsan karo, balse nasiib wanaag, waxaan cunnada ku helayay in la ii keeno” ayuu yiri laacibka Talyaaniga ah.
Haaland oo ceebeystay weerarka kooxda Real Madrid... (Benzema + Bale + Hazard)